Sensor Factory - China sensor Vagadziri, Vatengesi
H2S Detector CLH100
Model Nhamba: CLH100 Kukodzera: Marasha Mugodhi Kudzivirirwa Chitupa Kuputika-chiratidzo Chitupa Chekuongorora Certification Zvikumbiro: Imwe chete H2S detector chishandiso chakachengeteka mukati uye chinoputika-chiratidzo uye chakagadzirirwa kudzora H2S. Imwe chete H2S detector ndeye yakachipa-kudhura, yekuchengetedza-isina imwe gasi yekutarisa yakagadzirirwa kuchengetedza vashandi kubva kune ngozi H2S gasi kuratidzwa mumamiriro akaipisisa Kunyangwe iri diki kukura kwayo, imwe chete H2S detector inosanganisira maficha anowanzo kuwanikwa mu ...
GWSD100-100 Kucherwa Kwemigodhi uye Humidity Meter
Muenzaniso: GWSD100 / 100 Kushanda: GWSD100 / 100 Mining Tembiricha uye Humidity Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi gomba Kupisa uye Humidity kuita yakajairika chiratidzo chemagetsi wozoendesa kune izvo zvinoenderana zvishongedzo. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Vakawanda kushandiswa mumunda marasha mugodhi kushanda fac ...
GWD100 Kucherwa Kwekupisa Meter
Muenzaniso: GWD100 Kushanda: GWD100 Mining Tembiricha Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi tembiricha yegomba kuita chiratidzo chemagetsi wozoendesa kune anowirirana machira. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wemugodhi wemigodhi unoshanda kumeso, magetsi uye mega bako ...
GPD10 Kucherwa Kusiyanisa Pressure Meter
Muenzaniso: GPD10 Brand: TOPSKY Kushanda: GPD10 Mining Yakasiyana Pressure Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi gomba kusiyanisa kumanikidza kuita muyero wemagetsi chiratidzo uye wozoendesa kune izvo zvinoenderana zvishongedzo. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Vakawanda kushandiswa mumunda marasha mugodhi kushanda kumeso, e ...
Kuchera H2S mita GLH100
Kushanda: GLH100 H2S Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi gomba H2S yekuisa mumagetsi chiratidzo wozoendesa kune anowirirana machira. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wemugodhi wemarasha unoshanda kumeso, magetsi uye mega cavern uye kudzoka mweya munzira. K ...
Kuchera CO Meter GTH1000
Kushanda: Uchishandisa inopinza refu-hupenyu hupenyu hwemagetsi emakemikari uye diki simba rekushandisa imwe-chip microcomputer yekudzivirira bere, ina LCD inoratidzira, kwete chete kurira uye mwenje alarm, zero yekutevera, otomatiki Backlight, pasi-voltage alarm mabasa, asi zvakare yakarurama uye yakavimbika, yakareba Hupenyu hwebasa, diki vhoriyamu, huremu hwakareruka, Kushanda kuri nyore, kugadzirisa zviri nyore, nezvimwewo Ichi chishandiso chinoshandiswa zvakanyanya mukuvapo kweinogona kutsva gasi musanganiswa unoshanda nharaunda uchienderera ...
GYH25 Kuchera O2 mita
Magadzirirwo Meter yeo2 kuona, pa-gwapa kuratidza, kure-kure chiratidzo comunication, kurira uye mwenje alarm, infrared kure kugadzirisa Chikumbiro Ichi chigadzirwa chinoumba chizvarwa chitsva chakangwara okisijeni sensors. Iine standard chiratidzo kuburitsa, inogona kushanda pamwe chete kana nemhando dzakasiyana dzekutarisa masystem uye mabhureki kuti arambe achiongorora kuwanda kweOxygen munzvimbo ine moto unoputika uye unoputika. Iine mashandiro erefu-kure kure ...
Michini CH4 mita GJH4 (A)
Kushanda: GJH4 (A) Infrared CH4 Meter inogona kuenderera uye nekushandura pasi gomba CH4 kusungirirwa kuita chiratidzo chemagetsi wozoendesa kune anowirirana machira. Inogona kuratidza kuwanda kwemethane mu situ uye ine basa rekushandura rinonzwika uye rinoonekwa alarm. Inogona kubatanidza pamwe zvichiongororwa hurongwa, mudariki uye mhepo simba gasi zvechizarira zviridzwa. Inoshandiswa zvakanyanya mumunda wemarasha ekuchera anoshanda kumeso, magetsi nemagetsi bakovha uye kudzoka mweya ...
GRG5H michini Carbon Dioxide CO2 Sensor
Model: GRG5H Brand: TOPSKY Chikumbiro Zvinoenderana neiyo gasi pakarepo kusangana, transfinite alarm uye inoburitsa simba rekutonga. GRG5H Infrared carbon dioxide sensor Chimbo ichi chine kutsunga, zvinoenderana neiyo gasi ipapo, kutapudza alarm uye kubuda kwesimba simba, infrared remote control signal calibration, dijiti kutaurirana, uye mamwe mabasa. Ichi chigadzirwa CHINOSHANDISA iyo yepasirese yepamusoro isingaparadzi infrared yekuona tekinoroji, kukurira iyo p ...
GJC4 Yakadzika Yekusungwa CH4 Meter
Muenzaniso: GJC4 Brand: TOPSKY Magadzirirwo eSensor yeiyo yakadzika concentration methane, pa-nzvimbo kuratidza, kureba-kure chiratidzo chiratidzo, kurira uye mwenje alarm, infrared kure Chikumbiro 1. Ichi chigadzirwa chinoumba chizvarwa chitsva chevakangwara methane sensors. Iine standard chiratidzo kuburitsa. Inogona kushanda pamwe chete nemhando dzakasiyana dzekutarisa masystem uye mabhureki kuti arambe achiongorora kuwanda kwemethane munzvimbo ine moto unoputika uye unoputika. 3.I ...